Muuse Biixi Cabdi oo ku guuleystay doorashadii madaxweynenimada Somaliland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSomalilandMuuse Biixi Cabdi oo ku guuleystay doorashadii madaxweynenimada Somaliland
November 21, 2017 Puntland Mirror Somaliland 0
Sawirka: Muuse Biixi Cabdi intii lagu guda jiray ololaha doorashada.
Hargeysa-(Puntland Mirror) Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Kulmiye ayaa lagu dhawaaqay in uu ku guuleystay doorashadii madaxweynenimada Somaliland.
Muuse ayaa helay 55.19% codadka, halka ninkii ugu dhawaa ee la loolamayay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu helay 40.73%, cod, sida maanta oo Talaado ah Guddiga Doorashooyinka ay kaga dhawaaqeen Hargeysa.
Ciro, oo ah musharax katirsan xisbiga Wadani ayaa Isniintii sheegay in xisbigiisu uusan aqbali doonin natiijada, isaga oo xusay in doorashada lagu shubta.
Asbuucii lasoo dhaafay, ku dhawaad 700,000 qof oo reer Somaliland ah ayaa dhiibtay codkooda si ay u doortaan madaxweyne cusub.
Somaliland oo ku taal woqooyi galbeed Soomaaliya, waxay isu tixgelisaa in ay tahay dowlad madaxbannaan, laakiin ma aqoonsana beesha caalamku.
Waa kuma Muuse Biixi?
Madaxweynaha cusub, Muuse Biixi Cabdi, waa 69-sanno jir, waxa uu katirsanaan jiray ciidamada cirka Soomaaliya kahor inta uusan noqon hoggaamiye jabhadeed, SNM oo ahayd dhaq-dhaqaaq ujeedadeedu ahayd sidii xukunka looga tuuri lahaa Maxamed Siyaad Bare.
Waxa uu wax ku bartay Midowgii Soofiyeedka ee burburay iyo Mareykanka.
Wuxuu hore u ahaan jiray Wasiirka Arrimaha Gudaha ee maamulkii Maxamed Ibarhim Cigaal, oo ahaa madaxweynihii hore ee Somaliland.
Muuse ayaa loo doortay guddoomiyaha xisbiga Kulmiye sanadkii 2010.
Dabayaaqadii 2015, waxaa loo doortay musharaxa madaxweynenimada xisbiga Kulmiye.
November 13, 2017 Dadka reer Somaliland oo dooranaya madaxweyne cusub
November 16, 2017 Mudaharaadyo rabshado wata oo ka qarxay Somaliland kadib markii xisbiga mucaaradka uu ku eedeeyay Guddiga Doorashooyinka Qaranka in ay taageerayaan xisbiga talada haya
Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo meelmariyay heshiiska siyaasadeed ee doorashooyinka dalka
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xubnaha labada aqal ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare ayaa maanta oo Sabti ah meelmariyay heshiiska siyaasadeed ee doorashooyinka soo socda. Ku dhawaad 250 xubnood ayaa ogolaaday heshiiska halka [...]